5 Jaamacadood ee ugu Fiican Afrika ee Daawada Hadda 2022
5 Jaamacadaha Afrika Ugu Fiican Daawooyinka Hadda
Waa salaaman tihiin, maanta waxaan la imid liis hubaal ah inaad xiise u yeelan doontaan arday Afrikaan ah ama caalami ah oo raba inuu wax ka barto jaamacadaha ugu wanaagsan Afrika. Waa kuwan liiska jaamacadaha ugu wanaagsan Afrika ee daawada. Jaamacadahani waxay aqbalaan ardayda meel kasta oo adduunka ah haddii kaliya ardayga noocaas ah uu la kulmi karo shuruudaha gelitaanka.
Daawada waa mid ka mid ah koorsooyinka badan ee aadka u baahan maxaa yeelay bulshada ayaa fahansan waxa loola jeedo in noloshooda loogu gacan geliyo nin / haween gaar ah oo laga yaabo inay tahay "Dhaqtar".
Dhakhaatiirtu sida caadiga ah si fiican ayaa loogu tababaray maahan oo kaliya aqoonta tacliinta laakiin sidoo kale dhaqanka.
Waa sababta oo ah nooca shaqada ee shaqaalaha caafimaadku qabtaan, in ardayda caafimaadka ee ku talo jirta ay raadiyaan jaamacadaha caafimaadka ee ugu wanaagsan meel kasta ka hor intaanay codsan diiwaangelinta.
Afrika gudaheeda, raadinta jaamacado caafimaad oo wanaagsan ayaa kor u kacaya maaddaama dadku hadda fiiro gaar ah u yeelanayaan asalka tababarka dhakhaatiirta waana sababta ay u go'aansanayaan inta kalsoonida ay siinayaan dhakhaatiirtan.
Maaddaama aad tahay arday caafimaad oo ka socda Afrika, way qurux badnaan kartaa inaad raadiso inaad wax ku barato dibadda laakiin si daacadnimo ah, weli waad ku heli kartaa waxbarasho caafimaad oo wanaagsan halkan Afrika.
Waxay noqon kartaa mid aad qaali ugu ah barashada daawada dibada, in kasta oo deeqda waxbarasho ay kaa caawin karto inaad yareyso kharashka, waxaa jira tartan badan oo loogu talagalay deeqaha waxbarasho ee yar ee la heli karo sidaa darteed waxaan kula talinayaa inay fiicnaan laheyd in had iyo jeer la helo qorshe B.
Qaar ka mid ah deeqdan waxbarasho ee caalamiga ah xitaa waa hal mar, taas oo macnaheedu yahay, waxaa lagu siinayaa lacagta hal mar oo keliya. Marka maxaa ku dhacaya khidmadaha waxbarashadaada sanadka soo socda? Tani waa sababta ay ugafiican tahay in sifiican loo falanqeeyo fursadaha deeqda waxbarasho si loo hubiyo inaad sii wadan karto ama wali sifiican ufiiri karto, fiiri qaar kamid ah jaamacadaha caafimaadka ee ugufiican Africa halkaas oo aad hubto inaad daryeesho ujrooyinka waxbarista maadaama ay aad ugayaryihiin.
Sikastaba, haddii aad nasiib u leedahay inaad hesho deeq waxbarasho oo si buuxda loo maalgeliyo oo dibadda ah, hambalyo! Wax ku barashada dibada waxay kugu soo bandhigeysaa waxbadan garoonka.
Horaantii, waxaan ku qoray 10 jaamacadaha ugu fiican Jarmalka si ay u bartaan caafimaadka, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad fiiriso maqaalka si aad u ballaariso xulashooyinkaaga.
Halkan, kuwa xiisaha badan leh ama laga yaabo inay sidoo kale ka fekerayaan inay wax ku bartaan Shiinaha, waxaan haystaa liistada jaamacadaha ugu wanaagsan Shiinaha ee daawada.
U jarista liiska hoos u dhigista qiimeynta waddanka, waxaan ku leeyahay maqaal iskuulada caafimaadka ee Koonfur Afrika marka waa in dantaada laga helaa wax badan Koonfur Afrika markaa waxaad eegi kartaa liiska.
Waxaa sidoo kale jira deeqo waxbarasho oo dhowr ah oo loogu talagalay ardayda hadda dhigata iyo kuwa qorshaysan intaba waxaanan inta badan fursadahaan isugu geynnaa liistada sida deeqaha caafimaadka ee ardayda caalamiga ah ee Kanada iyo kan ugu hoyga badan liiska deeqaha waxbarasho ee caafimaadka ee ardayda Afrikaanka ah ee dibedda jooga.
Halkan, waxaan rabaa inaan ka hadlo jaamacadaha ugu wanaagsan Afrika ee daawada waxaanan aaminsanahay inay tani kaa caawin doonto go'aan qaadashada haddii aad rabto inaad wax ku barato mid ka mid ah iskuulada caafimaadka ee ugu wanaagsan Afrika.
Jaamacadaha ugu Fiican Afrika ee Daawada (Jaamacadaha Caafimaadka ugu Fiican Afrika)
Jaamacadaha ugu Fiican Afrika ee Caafimaadka
(Jaamacadaha Caafimaadka ee ugu Fiican Afrika)
Jaamacadda Makerere waa jaamacadda ugu fiican Afrika dhanka daawada. In kasta oo liiskan aan loo nidaaminin si kastaba ha ahaatee waxaan si ula kac ah u dhigay Jaamacadda Makerere hoggaanka sare sabab ahaan.
Jaamacadda Makerere, Kampala waa hay'adda ugu weyn uguna saddexaad uguna da'da weyn ee tacliinta sare ee dalka Uganda, oo markii ugu horreysay loo aasaasay dugsi farsamo sanadkii 1922. 1963dii, waxay noqotay Jaamacadda Bariga Afrika, iyadoo bixisa koorsooyin u horseedaya shahaadooyin guud Jaamacadda London.
Haddii aad rabto inaad wax badan ka barato Jaamacadda Makerere, waxaad ka hubin kartaa wax badan oo ku saabsan jaamacadda khadka tooska ah ama waxaa laga yaabaa inaad booqato bogga tilmaanta arjiga gelitaanka.
Jaamacadda Gaana maaddaama mid ka mid ah jaamacadaha caafimaadka ee ugu wanaagsan Afrika ay tahay tan ugu da'da weyn uguna weyn saddex iyo tobanka jaamacadood ee guud ahaan Gaana. Waxaa la aasaasay 1948, oo ku taal gumeysiga Ingiriiska ee Gold Coast, oo ah Kulliyadda Jaamacadda ee Gold Coast laakiin hadda waxaa loo yaqaan Jaamacadda Ghana.
Jaamacadu waxay ku dallacdaa khidmadda waxbarashada jaamacadeed ee kaliya 1,525 GHS ee ardayda reer Ghana iyo 3,850 GHS ee ardayda caalamiga ah.
Waxaad ka eegi kartaa soo baxay Jaamacadda gelitaanka Jaamacadda Ghana Wixii macluumaad dheeraad ah.
Jaamacadda Nairobi waa mid ka mid ah jaamacadaha Afrika oo diiwaan wanaagsan ku leh barashada caafimaadka. Jaamacadu waxay kicisay dhakhaatiir badan oo caafimaad kuwaas oo ku shaqeynayay natiijooyin cajiiba ilaa hada.
Jaamacadu waa jaamacad cilmi baaris oo kuleejo ku taal Nairobi. Waa mid kamid ah jaamacadaha ugu waa weyn dalka Kenya waxayna wali astaan ​​sharaf u tahay wadanka. Jaamacadda Nairobi waxay ka gashay liiska jaamacadaha ugu wanaagsan Afrika ee awooddeeda waxbarasho.
Jaamacadda Ibadan waa mid kamid ah jaamacadaha ugufiican Afrika dhanka daawada. Waxay ku taalaa Nigeria, jaamacadu waxay u istaagtay inay tahay jaamacada ugu wanaagsan dalka muddo kadib, tani waxay sharraxaysaa sababta ay u leedahay dareenka caalamiga ah.
Jaamacadda Ibadan waa jaamacadaha ugu da'da weyn Nigeria waxayna ku taal meel shan mayl u jirta bartamaha magaalada weyn ee Ibadan ee Galbeedka Nigeria. Waxaa caan ku ah Unibadan ama UI.
Jaamacadu waxay aqbashaa ardayda caalamiga ah laakiin sida ku xusan Study Nigeria, jaamacadu waxay ubaahantahay in ardaydani ay fadhiistaan ​​oo ay ku aflaxaan imtixaan gudaha ah Gudiga Ogolaanshaha Wadajirka ah iyo Jaamicada Nigeria ka hor inta aan loo tixgelin in la aqbalo iyadoo la tixgelinayo waxqabadka guud.
Jaamacadda Botswana waxaa lagu tiriyaa jaamacadaha caafimaadka ee ugufiican Afrika ee aqbala ardayda caalamiga ah waxayna leeyihiin khidmad waxbarasho oo la awoodi karo.
Jaamacadda caanka ah ee loo yaqaan UB waxaa lagu aasaasay 1982 oo ah hay'addii ugu horreysay ee tacliinta sare ee Botswana. Jaamacadu waxay leedahay seddex xarumood: mid ka mid ah magaalada caasimada ah ee Gaborone, midna Francistown, iyo mid kale oo ku yaal Maun.
Waxaa jira jaamacado badan oo wanaagsan oo Afrika ah oo loogu talagalay daawada laakiin shantaan ayaa liiska ugu sarreeya sida waqtiga maqaalkan. Haddii aad wax su'aal ah ka qabtid tan, waxaad isticmaali kartaa sanduuqa faallooyinka ee hoose.
4-ta Jaamacadood ee ugu Fiican Tiknoolajiyadda Koonfur Afrika
Top 3 Jaamacadaha ugu Qaalisan Koonfur Afrika ee Ardayda Caalamiga ah
Iskuulada Caafimaadka ee Koonfur Afrika ee loogu talagalay Ardayda Caalamiga ah
16 Koorsooyin onlayn ah oo bilaash ah oo Koonfur Afrika ah oo wata shahaadooyin
Jaamacadaha caafimaadka ee ugufiican Afrikajaamacadaha ugu wanaagsan afrika ee daawadadaawo africajaamacadaha africa ee daawada
Previous Post:6 Siyaabo Awood Leh oo Loogu Hormariyo Lahjaddaada Af Ingiriisiga
Post Next:9 Kulliyadaha Kitaabka Quduuska ah ee Kitaabka Quduuska ah ee Bilaashka ah ee Bilaashka ah ee ay tahay inaad ogaato
Angelo wuxuu leeyahay,
February 4, 2020 at 11: am 53
Liiskaaga lama aamini karo maadaama aysan jirin wax shuruudo ah oo uu ku saleysan yahay. Waxaad si fudud ugu xulatay adoo ku saleynaya dookhaaga ama aqoontaada shaqsiyeed. Ma jiro hal jaamacad oo ku yaal liistadan mid ka mid ah dugsiyada ugu sarreeya Waqooyiga Afrika. Ka waran Koonfur Afrika… ma jiraan iskuulo sare oo xagga caafimaadka ah?
Marka waa inaad u badashaa cinwaanka maqaalkaaga "Liisteyda Shakhsiyadeed ee Dugsiyada Caafimaadka ee Afrika". Runtii waa talo soo jeedin wanaagsan, laakiin fadlan ha ugu yeerin Top 5 sidii aad ku sameysay nooc daraasad cilmiyeed ah.
April 2, 2020 at 6: 14 pm
Iskuulada halkan ku taxan waxaa laga soo qaatay liistada dugsiyada ugu fiican Afrika. Waxaan ka dooranay shanta dugsi ee ugu horeeya liiska daawada bixiya.
Haddii aad hayso soo-jeedinno liddi ku ah, waad sii socon kartaa oo waad samayn kartaa si aan arrintaas u eegno.
Hadiyad Israel, MBChB wuxuu leeyahay,
November 29, 2020 at 8: am 06
Angelo gacaliye aamin ama ha rumeysto, MakCHS (MAKERERE UNIVERSITY COLLEGE OF SCIENCES Health) waa iskuulka caafimaadka ugu fiican Afrika.